Dawladda Baxreyn Oo Dab Ku Sii Shiday Xiisadda Diblomaasiyadeed Ee Soomaaliya Iyo Imaaraadka Carabta | Haqabtire News
Dawladda Baxreyn Oo Dab Ku Sii Shiday Xiisadda Diblomaasiyadeed Ee Soomaaliya Iyo Imaaraadka Carabta
Bahrain:-(HTN) Dowladda Baxreyn ayaa ku soo biirtay xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex qaraxyday dowladdaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, xilli bilihii la soo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka labada dal.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Baxreyn Sheikh Khaalid Bin Ahmed Al Khaliifa ayaa farriin uu bartiisa Twitter-ka ku weeraray dowladda Soomaaliya, isagoo tilmaamay inay inkirtay kaalmadii iyo taageeradii ay u fidisay Imaaraadka Carabta.
“Imaaraadku waxa uu Soomaaliya u qabtay shirar kala duwan oo lagu taageerayay Soomaaliya oo uu goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Soomaaliya, waxa ay garab istaagtay Soomaaliya dagaalka ay kula jirtay burcad badeeda, waxa ay fulisay wax waliba oo waajib ah , waxa ay u fidisay kaalmo dhaqaale, hub iyo daawo. Soomaaliya waxa ay uga falcelisay inkirid, xumeyn iyo inay is dhex dhigto dhabta cadowg Ummadda”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Baxreyn.
Baxreyn ayaa ka mid ah afartii dal ee xiriirka u jaray sanadkii hore dalka yar ee Qatar, waxaana uu ka mid yahay Xulafada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya ee xaalada go’doon geliyay Qatar.
Dowladda Soomaaliya ayaa mowqif dhex dhexaad ah ka qaadatay xiisada siyaasadeed ee Khaliijka, hase ahaatee waxaa muuqata in xiisada Khaliijka inay u soo wareegtay Soomaaliya, marka loo eego hardanka ka dhex socda dalalka Qatar iyo Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.